BLEACH Mobile 3D waa ammaan sharaf leh oo barakeysan sida ARPG | Androidsis
Mid ka mid ah anime-yaasha ugu caansan ayaa ku soo dhaca mobilkaaga Android oo leh BLEACH Mobile 3D. Aaladda 'ARPG' ee kuwa daran ee shaashadda ay ku abuureyso firfircooni noocaas ah ee dagaallada kugu qasbi doonta inaad ciyaarto oo aad ciyaarto nasasho la'aan.
Shaqo fiican laga bilaabo KLabGames ilaa soo saari nuxurka anime Japanese taasina waxay kugu qaadan doontaa inaad ku noolaato sheekada Wakiilka Shinigami. U fiirso muuqaalka shineemooyinka iyo ficil-socodka degdegga ah ee ciyaaraha ee aad ku maareyn doontid halyeeygaaga naftaada oo aad awoodi doontid inaad ku soo bandhigto dhammaan noocyada xirfadaha ee ka dhan ah dhammaan noocyada cadawga badan.
1 Codadka asalka ah ee Jabbaan iyo nuxurka anime
2 Goobaha caanka ah ee BLEACH Mobile 3D
3 Ciyaaryahan-waqtiga dhabta ah la PvP
Codadka asalka ah ee Jabbaan iyo nuxurka anime
Waxaan dhihi karnaa waxaan wajaheynaa mid ka mid ah imaadayaasha ugu fiican sanadka marka aan ka hadalno cinwaan ka yimaada anime Japanese iyo waa maxay ciyaarta dagaalka. Shaqada sawirku waa sharaf Oo haddaan ku darno codadka asalka ah tan, waxaad lahaan doontaa waayo-aragnimo Jabbaan ah oo ka timid mobilkaaga shaashadda, muuqaalkeeda, iyo kuwa ku hadla ama dhagaha, ee codka.
El Dagaalku waa mid aad u kacsan waxayna ku bari doonaan inaad qaado talaabooyinka ugu horeeya ilbidhiqsiyo gudahood. Waxaad haysataa ul xakamaynta si aad u dhaqaajiso dabeecadaada iyo badhamada kala duwan ee aad ku weerareyso. Ma yaraynayno muhiimada qaybtan otomaatiga ah, in kasta oo aan u dhaafnay hawlgallada oo aan aadno qodobbada noo oggolaan doona inaan si sax ah u horumarsanno. Laakiin waxay ku jirtaa dagaal halkaas oo aan kugula talineyno inaad gacanta ku qabato dhammaan khibradaha ay tahay.
Aan aragno, maahan wax asal ah oo gaar ah, laakiin waxaa ugu yar yaraanta noocyada ciyaaraha, iyo wixii ka sarreeya oo dhan markay dad badani door bidaan wax walba otomaatig ah, BLEACH Mobile 3D waa guul lagu sharfayo ARPG inta aan sugeyno Jidka Qaxa y Ibliis aan dhimanayn; haa, in ka sii badan "galbeedka ah" oo leh mugdi iyo dhawaq badan.
Goobaha caanka ah ee BLEACH Mobile 3D
Kuwa idinka mid ah ee raacaya anime ee yaqaan BILAASHKA, waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan hareeraheeda iyo goobaha ay ku yaalliin. Waxaan ka hadlaynaa Kurosaki Clinic, dukaanka Urahara ama Degmada Rukon lafteeda. Waxaas oo dhami waxay ku xardhan yihiin shaqo aad u weyn oo muuqaallada ka mid ah si moobiilkeennu u noqdo aaladda ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto khibrada anime ee ahayd oo ahayd BILAASH.
Waad xakameyn kartaa jilayaasha sida Byakuya Kuchiki, Kenpachi Zaraki ama Uryu Ishida sidaasna lagu abuuro kooxda ugu awoodda badan. Aynu nidhaahno iyagoon waxba ilaawin sidaa darteed waaya-aragnimadu ugu fiican tahay ciyaartuna waa tusaalaha ugu habboon ee sida loo keeno manga ama anime shaashadda ugu qaawan ee qalabka moobiilka.
Sidoo kale waa la wici karaa BLEACH Mobile 3D oo ah MMORPG qaybteeda ciyaartoy badan iyo in aynaan dhinac iska dhigin. Waxay sidoo kale leedahay bartaas joogtada ah si loo helo ciyaartoy fara badan oo tagaya goobaha shaqada kadibna galaya.
Ciyaaryahan-waqtiga dhabta ah la PvP
Waana halka ay dhigayso BLEACH Mobile 3D icing on keega laftiisa taas oo kaligeed la multiplayer in Waqtiga dhabta ah, dagaallada shaqsiyeed ee udhaxeeya ciyaartoyda iyo la ciyaarista lamaanayaasha ka soo horjeeda cadawga xoogga leh. Ma aysan ilaawin dhinac muhiim ah oo ay u leeyihiin dhowr nooc iyo madadaalo ay ku sii bataan asxaabteena iyo asxaabtayada.
Muuqaal ahaan waa mid ka mid ah ciyaarahaas oo soo jiitay dareenka fekerka ugu yar farsamo ahaanna waan soo bandhigi doonnaa ka hor animationsyada qaar, saamaynta muuqaalka iyo shineemooyinka oo dagaalka u rogi doona ficil laftiisa. The heesaha uu isagu leeyahay ayaa si fiican loo yaqaan oo wuxuu na hor dhigayaa dhaqankaas Jabaan si fiican saamayn ugu leh kan galbeedka marka loo eego dhinacyo kala duwan. Waxaan sidoo kale muujineynaa qeylada geesiyaasheena uu ka sameynayo dagaalka taas oo naga dhigeysa inaan ka buuxsamno ficillada oo dhan. Dabcan, waxay ku jirtaa Isbaanish, sidaa darteed ma jirto wax cudurdaar ah oo aan la isku dayin cajaa'ibkan ARPG oo leh taabashadeeda MMO.
BLEACH Mobile 3D waa soo degitaan weyn oo ka yimaada Japan lafteeda si ay dhaqankooda ugu keenaan moobilkaaga oo aad ugu sakhraansamaan sheekada weyn ee BILAASHKA anime. Waa mid kale oo ka mid ah ciyaarahaas 2019 kuwaas oo aasaas u ah ciyaaraha moobiilka si ay ugu guuleystaan ​​tiro aad u tiro badan tobanka sano ee soo socda oo loo qaato sidii wax ka sii daran sidii ay ahayd illaa hadda.
Nuxurka saafiga ah ee anime
Dagaalkii iyo qayladii geesiga
Hayso qaabkaas otomaatiga ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » BLEACH Mobile 3D waa ammaanta saafi ah ee mobilkaaga oo leh nuxurka anime